KOMPREXX - Quanzhou Omi Uwe Co., Ltd.
EGO MGBE EGO EGO
Anyị mkpakọ ogologo ọkpa na egwuregwu na-efe bụ ihe ngwọta zuru oke maka egwuregwu niile na mgbatị ahụ. Ihe siri ike, nke dị nro na-enye nkwado maka ọkara dum nke ahụ gị. Mgbe ị na-eyi leggings anyị na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ọsọ, ọ dị ka ịnwe mgbapụta na-agba ume na apata ụkwụ gị nke ga-enye gị mmelite arụmọrụ n'oge mmega ahụ gị!
AKW EFKWỌ NDF ỌRF
Mkpakọ tights igbochi oké muscle ngagharị nke na-ewe mgbe na-agba ọsọ, ndinyanade mbịne, ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ yoga mgbe chebe ike na-enye gị mma arụmọrụ na ndị ọzọ ntachi obi. Ha bụ akwa mkpakọ leggings ma ọ bụ uwe ogologo ọkpa. N'agbanyeghị ihe ị na-eme, anyị mkpakọ gia ga-enyere gị aka kasị mma!
Naa mgbu, Ngwa ngwa mgbake akwa
Iji mkpịsị mkpakọ na-ebelata ihe mgbu ma n'oge na mgbe emechara ahụ ike, na-enye gị ohere imega ahụ ogologo oge. Ọbara dị mma site na mkpịsị mkpakọ anyị na-eme ka mgbake ngwa ngwa ma gbochie ike ọgwụgwụ.
SMART akwa, abawanye nkasi obi akwa
A na-eji nlezianya ahọrọ ụzọ 4 na-agbatị akwa iji hụ nkasi obi kachasị - iwe ma ọ bụ chafing. Uwe a na-egbusi ọsụsọ ngwa ngwa, na-eme ka akpụkpọ gị kpoo ma dị mma. Uwe mgbatị ahụ anyị dị mfe ọcha ma ọ na-echekwa ọdịdị ya ọbụlagodi mgbe ọtụtụ gachara. Na, slimming body na-enye gị ihu ọma na-atọ ụtọ ma bụrụ mgbakwunye akwa uwe onye ọ bụla.